Mamy Ravatomanga : Nilatsaka ny saron-tavany -
AccueilRaharaham-pirenenaMamy Ravatomanga : Nilatsaka ny saron-tavany
03/04/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nisy tokoa ireo nihevitra fa fankahalana manokana an’i Mamy Ravatomanga ny filazana fa ny tenany no tao ambadik’ireny hetsika fanozongozonana sy fanakorontanana teto ireny, raha tsy hiresaka afa-tsy ny raharaha Soamahamanina, ireo grevy sy fitokonana ary hetsika politika ireny. Nilatsaka ihany anefa ny saron-tavany rehefa ela, ka dia ireny niaraha-nahita tany Mahajanga ireny.
Nialokaloka tao ambadiky ny hoe « mpandraharaha malagasy » hatrany i Mamy Ravatomanga, ary io maha mpandraharaha azy io hatrany no nataony fitaovana niarovan-tena raha vao misy raharaha mahakasika azy, raha tsy hiresaka afa-tsy ilay fisavana ny trano fonenany nataon’ny mpitandro filaminana. Novoizina hatrany ny hoe « mpandraharaha malagasy » i Mamy Ravatomanga mba nanairana sy nampihetsehana ny fo amam-panahin’ny olona hino fa mamono ary manapotika ny mpandraharaha malagasy ny fitondrana ankehitriny.
Nilatsaka anefa ilay saron-tava, ary noporofoin’ny nataony ihany i Mamy Ravatomanga. Tsy ilay « mpandraharaha malagasy » novoizina hatrizay no hitan’ny mason’ny vahoaka fa ilay mersenera politika, mpampiasa vola hahazoana fitondrana mba hananana toerana sy fahefana tsy refesi-mandidy tahaka ny nitranga nandritra ny Tetezamita. Mazava ho azy fa tombontsoa manokana sy fangoronan-karena daholo no mibaiko izany rehetra izany, ary ny fandavan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina hanome an’i Mamy Ravatomanga izay fahefana tsy refesi-mandidy teo am-pelatanany nandritra ny fitondrana HAT izay no fototr’izao zava-misy ankehitriny izao.
Ny fiverenan’i Andry Rajoelina eo amin’ny fitondrana dia midika ho famerenana ny fahefana tsy refesi-mandidy teo am-pelatanan’i Mamy Ravatomanga nandritra ny HAT. Nandalo teo aminy avokoa mba tsy hilazana hoe ny tenany mihitsy no nanana ny teny farany tamin’ireny fifanarahana isan-karazany amina miliara teto ireny, raha tsy hiteny afa-tsy ny 100 tapitrisa Dolara avy tamin’ny orinasa Wisco vidin’ny vy tany Soalala (mitovy tamin’ny raharaha Daewoo nanenjehana an’i Marc Ravalomanana).
Ny fanaovana ampihimamba ny tontolo ara-toekarena tokoa mantsy no anisan’ny antony goavana nanenjehana ny fitondrana Marc Ravalomanana. Nitovy tamin’izany anefa ny zava-nitranga nandritra ny Tetezamita. Nataon’i Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga ampihimamba avokoa ny tontolon’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, ny fanomezana fahazoan-dalana ho an’ireo mpampiasa vola goavana, sy izay afera rehetra miresaka miliara maro, ary saika nisy an’i Mamy Ravatomanga avokoa ireo orinasam-panjakana goavana tahaka an’ny JIRAMA, ny Air Madagascar, ny SONAPAR moa dia iny nolalaoviny tanteraka iny, ka nahazoany ny Villa Pradon io, sns.
Ao anatin’ny fampandrosoana ny firenena malagasy tanteraka ny fitondram-panjakana mijoro amin’izao fotoana izao. Betsaka ireo fanamby napetraka izay efa tratra, betsaka koa anefa ireo mbola ho tratrarina entina hampandrosoana an’i Madagasikara. Tsy andraikitry ny Filoham-pirenena ...Tohiny
FJKM : Japian’ny TIM